नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा नेपाली विमा आतंक !
अमेरिकामा नेपाली विमा आतंक !
- शरद पोखरेल
पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपाली समाजमा विमा ठगी काण्डहरु एक पछि अर्को गर्दे सतहमा आइरहेका छन । विशेषत अमेरिकि नेपाली समाजका लव्ध प्रतिष्ठित देखि विभिन्न उच्च तप्काका व्यक्तिहरु यस काण्डमा मुछिएका छन । जसले सवैमा अन्योलको वातावरण छाएको छ ।
मूलतः अमेरिकी समाज सयौ वर्ष देखि विमामा आधारित छ । यहाँ प्रायःले आफ्नो व्यक्तिगत स–साना सम्पतिहरु देखि जीवनको विमा पनि गरेका हुन्छन । विमाका प्रकारहरु र त्यसवाट पाउने प्रतिफल पनि यता धेरै प्रकारका छन । यता विमा कंम्पनीहरु पनि पारर्दशी र परेको वेलामा छिटो छरितो सेवा दिने खालका हुन्छन । त्यसैले आज अमेरिकी समाजमा विमा जीवनको एउटा अभिन्न अंग झै विकसित छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
कसरी आयो अमेरिकामा नेपाली विमा समस्या ?
सधारणतया विमा गर्दा दुई थरी संलग्न हुन्छन । विमा कम्पनी र विमित व्यक्ति । विमा कम्पनीले विमिति व्यक्तिको सुविधाका लागी विमा अभिकर्ता वा एजेन्ट नियुत्ति गर्छ । जसले कम्पनी र विमित व्यक्तिको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ । मूलतः यस्ता एजेन्टहरुले आफ्ना गा्रहकलाई लिन लागेका विमाको गुण – दोष, मुनाफा आदिको यथार्थ जानकारी गराउछन र विमा कम्पनिका विगत र वर्तमान आदि सवै छर्लङ्ग पार्छन ।
यस्तै यता विमा पनि धेरै थरीका छन । त्यसमा कति वाध्यकारी छन भने कति चाहि सो इच्छाका । अमेरिकाको नेपाली समाजमा लोकप्रिय रहेको विमा जीवन विमा हो । जुन सो इच्छाको हुन्छ । प्रायः नेपालीहरुले यो विमा
आफ्नो कमाई र विमाको प्रतिफलका आधारमा लिने गर्छन । जसका लागी यहाँ स्थित एजेन्टहरुको सहायता नेपालीहरुले लिन्छन ।
हाल नेपाली विमा एजेन्टहरु अमेरिकामा प्रसस्तै पाइन्छन । प्रत्येक नयाँ गा्रहकवाट कमाई राम्रै हुने हुदा नेपाली विमा एजेन्टहरु गा्रहकहरुको खोजिमा सधै भौतारिरहेका हुन्छन । यस्ता एजेन्टहरुले अंग्रेजी राम्ररी नवुझ्ने र विश्वासमा विमा लिन खोज्ने सोझा नेपालीहरुलाई एकथरी विमाका नाउँमा अर्को थरी कमसल खालका विमा झुक्काएर भिडाएका प्रसस्त उदाहरणहरु पाइन्छन । प्रायः यस्ता विमा ग्राहक कम एजेन्ट वढि फाइदाका हुन्छन । यसरी एउटा नेपालीवाट अर्को नेपाली ठगिरहेको यता प्रसस्त भेट्टाइन्छन ।
विमा वेच्न के के गर्छन एजेन्टहरु ?
अमेरिकी नेपालीहरु माझ सवभन्दा चल्तीमा रहेको विमा जीवन विमा हो । जसको जालो यहाँको नेपाली समाजमा मज्जाले गाजिएको छ । अनौपचारिक तथ्याङक अनुसार हाल पाँच नेपाली मध्ये एक संग जीवन विमा छ । जीवन विमा लोकप्रिय भएरै हुनपर्छ यसका एजेन्टहरु पनि यता प्रसस्तै भेटिन्छन ।
हुनत जीवन वीमा गराउने सवै एजेन्टहरु खरावै छन भन्ने हैन । यद्यपि केहि कथित सुकिला मुकिला एजेन्टहरुले गलत मनशाय राखि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्दिदा यो व्यवसाय शंका उपशंका को घेरामा पर्न थालेको छ । विमा गराउनकै लागी हिजो आज केहि सिमित नेपाली एजेन्टहरुले यता अस्वाभाविक हतकण्डा अपनाइ रहेका छन ।
यस्ता एजेन्टहरु घरमा आउने, सम्वन्ध वढाउने, दाई भाईको नाता कायम गर्ने, काम खोज्दिने, एरपोर्टमा पुराउन जाने, लिन आउने मात्र हैन परेको वेलामा ग्रोसरी स्टोरवाट सागसव्जी वोकेर ल्याइदिने काम पनि गर्छन । उता नेपालमा झै अपनत्व नपाएर छटपटि रहेका नेपालीहरु कसैको सानो सहयोग पाउँदा सजिलै विश्वास गर्छन जसको फाइदा उठाउँदै विमा एजेन्टहरुले उनीहरुलाई कमसल विमा सजिलै भिडाउँछन । विमाका कारण ठगिएका सोझा नेपालीहरुको यथार्थ जान्न हिजो आज यता टाढा जान पर्देन ।
कसरी हुन्छ यो समस्या समाधान ?
हाल अमेरिकि नेपाली समाजका केहि प्रवुद्ध लेखक, समाजसेवी, वुद्धिजिवी र विमा पिडितहरुले आफू विमा एजेन्टहरुवाट ठगिन पुगेको कुरा लगातार विभिन्न माध्यमहरुवाट अगाडि ल्याइरहेका छन । उनीहरुले कसरी मानिसहरु ठगिएका छन ? कस्तो कस्तो विमामा नेपालीहरु वढि ठगिन्छन ? देखि सहि जीवन वीमाका आधारहरु के के हुन र यो कसरी गर्ने ? जस्ता यावत जानकारी मूलक विश्लेषण लेखका माध्यमद्धारा जनसामु ल्याइरहेका छन । उनीहरुले यस वारेमा छलफल एवं वहस पनि गरिरहेका छन । यसवाहेक विमा एजेन्टहरुलाई समस्या समाधानका लागी खुला वहसमा आउन पनि आव्हान गरिरएको छ । जसलाई सकारात्मक मान्न पर्छ ।
उता एजेन्टहरु भने पिडितहरुको आव्हानलाई वेवास्ता गर्दे आफू कानूनी उपचारमा लाग्ने भन्दै धम्कि पूर्ण मनसायले चिठि पत्र पेरित गरिरहेका छन । जसलाई सहि मान्न सकिदैन । कुरा जे भए पनि तथ्यहरुलाई पहिल्याउदा भन्न सकिन्छ नेपालीहरु जीवन विमामा ठगिएका छन । अनौपचारीक तथ्याङक् अनुसार नै पनि जीवन विमा गरेका चार जना मध्ये एक नेपाली ठगिएका छन । यद्यपि विडम्वना ठग्ने र ठगिने दुई थरी नेपालीहरु विच हिलो छयाप्पा छयाप् भैरहदा यहाका नेपाली संघ संस्था भने मौन छन । समस्या समाधानका लागी पहलकदमी कतै वाट भएको देखिदैन ।
अमेरिकि कागजलाई आधार मान्दा कानूनी उपचारमा कसैको जीत र कसैको हार त होला नै । सायद अवका दिनमा त्यसले त्यति महत्व पनि नराख्ला । महत्व त त्यसले राख्छ जसले हाम्रो विश्वास जित्छ अनि नैतिकतामा खरो उत्रन्छ । किनकी हाम्रो विश्वास अनि नैतिकता यहाँ देखि नेपाल सम्म गासिएको छ । हाम्रो आधार यहा देखि नेपाल सम्म गासिएको छ । यसैले यो समस्या डर धम्कि भन्दा आपसी सदभावले सुल्झाउदा जाति होला ।
- See more at: http://www.himalayakhabar.com/detail/60889.html#sthash.vdX7Gjjq.dpuf
बिमा विवाद: सोझै हेर्दा, बेच्नेलाई फाईदा
म यो जीवन विमा रद्द गरूँ कि श्रीमती ४ वर्षभित्र मरून् भनेर कामना गरौं !?
अहिले अमेरिकामा जीवन विमासम्बन्धी निकै तातोतातो बहस चलिरहेको छ । जीवन विमा बेच्ने एजेन्टले क्रेताको विमासम्बन्धी अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै महँगो दरमा कमसल खालको विमा बेचेको भन्ने आरोप लागेको छ । यस्तो विमाबाट केही व्यक्तिहरू ठगिइसकेको र अब अरू नेपालीहरू नठगिइयून् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि जीवन विमाका नाममा नेपालीहरूले नेपालीहरूलाई ठगिरहेको भनेर व्यापक मिडियावाजी भएको छ ।